हन्टिङ काण्ड - भाग १
कुरा केवल १०-१२ दिन अगाडीको कुरा हो । खैरेनिटार, मिलडाँडा, बेलचौतारा त्यति भुल्नु लायकको बजार पनि हैन । त्यति बजार नभएकाले समानाहरु किन्न खासै पाइदैन । मेरो साथी पल्लबले मलाई “एकजना मान्छे भेट्नु छ, दुलेगौँडातिर जाउँ” भन्यो । मेरो पनि काम नभएकोले “हुन्छ” भनेर उसको मोटरसाईकलमा हामी दुलेगौँडातिर लाग्यौ । दुलेगौँडामा पल्लबको मान्छे भेट्यौँ र एक घण्टाजति कुराकानी सकेपछि हामि छुट्टियौ । “अलि भोक लागे जस्तो भयो । "जाम यसो मःम खान” पल्लबले मलाई भन्यो र हामी दुलेगौँडाको युनिक डिपार्टमेन्ट स्टोरको पश्चिम तिरको होटलमा लाग्यौ । त्यहाँ लहरै मःम पसल थियो र हामी एउटा स्ट्यान्डर्ड हेटेलमा छिर्यौ । हामीले २ प्लेट मःम र एक एक वटा रेडबुल मगायौ । पसलको साहुनी अलि मोटी र पाको उमेरको थिई । पल्लब त पहिला पनि त्यहाँ आईराख्ने रहेछ । साहुनी ले “के छ हालखबर” भनेर सोधी । “सबै ठिकै छ, यसो भोक लागेर आएको नि खाजा खान” साथिले भन्यो । केहि छिनपछि २ प्लेट मःम र रेडबुल लिएर साहुनी आईन र टेबलमा राखेर गईन । भोक लागेकोले धमाधम मःम र रेडबुल खान थाल्यौ । “केटी चिक्ने हो” पल्लबले मलाई सोध्यो । म त अकमक्क परे र भने “के भनेको यार ? दिउँसै चिक्ने ? कहाँ छन केटी ?” पल्लब हाँस्दै भन्न थाल्यो - "मुजी चिक्छु मात्रै भनन, म व्यवस्था गरिदिन्छु ।" मैले 'मिल्छ भने चिकौन त' भनेँ । अनि उसले साहुनीलाई बोलाई र भनि “अनि साहुनी, मेरो साथीलाई काँचो मासु पनि खान मन छ रे, यसो व्यवस्था गरिदिनु पर्यो ।” साहुनी हाँस्दै भन्न थाली - "ए हो र ! भई हाल्छ नि । कलिलो मासु खाने कि, छिप्पिएको मासु खाने ?” मैले त कुरै बुझिन र सोधेँ “के भनेको यार ?” पल्लब मुसुक्क हाँस्दै - "बिहा नगरेको केटी चिक्ने कि बिहा गरेको आईमाई चिक्ने ?” भन्यो । मैले पनि लजाई लजाई “कलिलै खाउँ न त त्यसो भए” भने । साहुनीले कुरा बुझिछ र “एकै छिन है” भन्दै बाहिर निस्की ।
करीब १०-१५ मिनेट पछि साहुनी १ जना केटि लिएर भित्र छिरी । “ल यहि बहिनी हो, कुरा मिलाउनु” भन्दै केटीलाई हाम्रो क्याबिनमा छोडेर साहुनी बाहिर लागी । “ल सोल्टिनी, मेरो साथीलाई काँचो मासु खानु मन लाग्यो रे, के कति हो दाम मिलाउ ।” पल्लबले भन्यो । “मलाई ५०० दिनु र लजको २५० लाग्छ, हुन्छ ?” केटीले भनि । “मेरो साथीको फस्ट टाइम हो क्या, एकै छिनमा झारिहाल्छ होला, पाँच सय अलि धेरै भयो तिनसय मा हुन्छ ?” पल्लबले भन्यो । केटीले मलाई हेरी र भनि “त्यसो हो भने ४०० दिनु नि त ।” मोलतोल हुँदा ३५० मा कुरा मिल्यो र केटी मेरो छेउमा बसि । ओहो, केटीले रेडबुल र चुरोट खाएको देखेर त म हैरान भए । लाग्थ्यो कि उनी रक्सी र चुरोट निकै खान्थी । करीब १५ मिनेट जति खाई सकेपछि, केटी मेरो काखमा आएर बसी र भनि - "दाई त निकै हेण्डसम हुनु हुँदो रहेछ, नाम के हो तपाईको ?” मैले “मेरो नाम बिकास हो, तिम्रो नाम के हो नि ?” भने ।” उनले "सङ्गिता” भनिन । मेरो काखमा बसेकीले मेरो लाँडो पनि ठन्कि सकेको थियो । उनले थाहा पाईछन र भनि “ओहो, दाईको माल त निकै ठुलो जस्तो छ नि, मेरो कण्डोमा घोँच्यो ।” छेउको सबैजना गलल हाँस्यौ । “अब जाउँ न त लज तिर, अनि फेरि आएर खाउँला" भन्दै सङ्गिता उठ्न थालि । म उसको पछि पछि लागेँ ।
त्यही मःम पसलको माथि नै लज रहेछ । लजको काउण्टरमा गएर उनले कोठाको चाबि लिई र मैले दुईसय पचास रूपैया तिरेँ । मलाई चाबि सँगै काउण्टरको मान्छले एउटा कण्डोम पनि दियो । म त अचम्म परेँ तैपनि केहि नभए जस्तो गरि कण्डोम गोजिमा हाले र कोठा तिर लागे । कोठा नं. २०४ मा छिर्यौ । कोठा सानो र एउटा मात्रै खाट थियो । “बत्ति बाल्नु र ढोका लक गरिदिनु ल” सङ्गिताले भनि । बत्ति बालेर ढोका बन्द गरेर यसो फर्केको त, सङ्गिता सबै कपडा खोलेर नाङ्गै खाटम बसिसकेकी रहिछ । मलाई कता कता लाज लाग्यो र उ सँगै छेउमा बसे । “छिटो लुगा खोल्नुहोस न, मःम खान जानु पर्छ क्या” सङ्गिताले भनि । मैले पनि सबै लुगा खोले र खाटमा बसे । उनलाई मजाले नियालेर हेरेँ । दुधको पोका सानो सानो थियो र पुती वरीपरी भुत्लै भुत्ला । “दाईको लाडो त मजाको रहेछ नि, कत्रो मोटो र ठुलो । बिस्तारै चिक्नु ल, मलाई दुख्छ ।” “हुन्छ” भन्दै म उसको माथि चढेँ । उसको दुधको पोका माड्दै, चुस्दै मेरो लाडो उसको पुतीको मुखमा लगेँ । लाडो हातले समातेर पुतीको दुलोमा राखे र बिस्तारै ठेले । “आईय्या दुख्यो, बिस्तारै हाल्नु न” सङ्गिताले भनि । हुन पनि लाडो छिर्नै सकेको थिएन । एकछिन उनको पुती औलाले खेलाईदिन थालेँ । उनि ऽऽऽऽऽइस्स्स्… आह्ह… आह्ह… गर्न थाली । पुतीबाट पानी झरेकोले गर्दा मेरो औलाहरु च्याप च्याप भयो ।
अब त पक्कै छिर्छ होला भनेर फेरि लाडो हातले समातेर सङ्गिताको पुतीनिर राखे र ठेलेँ । मेरो लाडो उनको पुतीमा स्वात्तै छिर्यो । “आह्ह्ह्ह… आह्ह्ह्ह… उम्म्म्म्… इस्स्स्… आह्ह्ह…” सङ्गिता सुस्केरा हाल्न थाली । म बिस्तारै बिस्तारै उनको पुतीमा चिक्न थाले । शुरुमा बिस्तारै चिक्दै गएँ, केहिछिनमा कस्सी कस्सी चिक्न थाले । सङ्गितालाई पनि मजा आउन थालेछ । उ पनि तलबाट उफ्रिन थाली । मलाई च्याप्प समाउँदै, मेरो गालामा चुम्बन गर्दै “अलि भित्र सम्म हाल्नुन, मजा आईरहेको छ । आज धेरै मजा आयो । मेरो राजा अझै मजाले ठेल्नु न, उम्म… उम्म… उम्म… या… या… या… फक मि… फक माई पुसी… फास्ट… फास्ट… क्विक्कली… क्विक्ली… या… या… आह्ह… आह्ह… आह्ह… उम्म्… उम्म…” निकै मजा आइराछ सङ्गिता बर्बराउन थाली । मैले पनि मेरो स्पीड बढाएँ । उनको खुट्टा फारेर मेरो काँधमा राखेर कस्सी कस्सी चिक्न थाले । “आह्हह… उहुहु… उहुहु… इस्स्… आह्हह… आहह… उम्हहह” सङ्गिता कराउन थाली । केटीले पनि तलबाट धक्का दिएकोले मलाई पनि चिक्न खुब मजा आईरहेको थियो । पहिलो पल्ट बास्तविक चिकाईको अनुभव मैले गरि रहेको थिएँ । दस पन्ध्र मिनेट जनि चिकेपछि मेरो पनि माल झर्न आँट्यो र मैले भने - "सङ्गिता मेरो त झर्न लाग्यो ?” “भित्र नझार्नु ल, बाहिर निकालेर झार्नु” सङ्गिताले भनि । मैले मेरो लाँडो बाहिर निकाले । उनको पेटमा मैले मेरो लाडोबाट सेतो माल पिच्रित… पिच्रित… पच्यात… पच्यात… फचक… फचक… त्वाप… त्वाप… गरेर झारिदिएँ ।
सङ्गिता आखा चिम गरेर पल्टिरहेकी थिईन । एकछिनपछि सङ्गिता उठिन र म पनि उठेँ । उनले तन्नाले आफ्नो शरीर सफा गर्न थाली । मैले पनि तन्नालेनै मेरो लाडो सफा गरेर लुगा लाउन थालेँ । सङ्गिता पनि लुगा लगाएर तयार भई सकेकी थिईन । “आज धेरै मजा दिनु भयो, फेरि पनि आउनु होला ल । एकदमै रमाईलो गरि चिक्नु भयो तपाईले त । अर्को चोटि दुईपल्ट चिक्नु होला तर पैसा २५० मात्रै दिए पुग्छ ।” मैले पनि हुन्छ भनेँ । सङ्गितालाई ३०० रुपैया दिएँर हामी तल मःम पसल तिर झर्यौ । साथीपल्लब एक्लै बसि रहेको थियो । हामी फेरि सँगै बसेर मःम र रेडबुल खान थाल्यौ ।
यसरी रमाइलो चिकाई गरेर हामी बाइमा चढेर बेलचौतारा यानकि बिनोद बस्ने कोठामा आइपुग्यौँ । बिनोद कोठामा गुलो तेर्साएर सुतिरहेको थियो । हामीले उसलाई हाम्रो रामलिलाको कहानी सुनायौँ । कहानी बिनोदको कानले सुन्दै गयो तर असर उसको भाइलाई पर्दै थियो । उसको भाई जाँगेलाई धक्ल्दै 90 डिग्री कोणमा आइसकेको थियो । जसरी हुन्छ अब बिनोदलाई पनि शान्ती गराउनु थियो । त्यहीँ भएर हामी बिनोदको निम्ति अर्को हन्टिङ प्लान तयार गर्यौ ।
​हन्टिङ काण्ड भाग : २ पढ्न यहाँ जानुहोस् ।
हन्टिङ काण्ड - भाग १ 2017-07-12T22:33:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Miracle Teen Team
18+ story Adult Literature erotic story fucking story Nepali Sex Story Sex Story काण्ड संसार चिकेको कथा नेपाली युवा साहित्य नेपाली सेक्स ब्लग भालु चिकेको कथा यौन कथा
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: हन्टिङ काण्ड - भाग १